Ungalahlekelwa Izwi Lakho | Martech Zone
Ungalahlekelwa Yizwi Lakho
NgeSonto, ngoFebhuwari 10, 2013 NgeSonto, ngoMashi 24, 2013 Douglas Karr
Ngithole impendulo evela kubantu abambalwa ukuthi okuthunyelwe kwethu kwakamuva kube eyomile. Ngeke ngiphikisane nalokho - besimatasa senza ucwaningo olunzulu ngamathuluzi nezici zamuva. Kubukeka sengathi lapho sijula ​​kakhulu senza ucwaningo lwethu, kuba nzima ukubhala umbhalo omfishane owenza ubulungiswa besikhulumi kepha uqinisekise ukuthi izwi lakho liyezwakala.
Lo mngani wami ungumfundi okhuthele webhulogi, futhi ubhala kuyo futhi, ngakho-ke ngilalele futhi ngizokwenza izinguquko ezithile. Ngokuthunyelwe ngakunye, ngizofaka umbala owengeziwe engxoxweni nawe. Martech Zone ithatha umbono wethemba lokuthi ubuchwepheshe bungabasiza kanjani abakhangisi. Okuxakayo ukuthi anginathemba. Ngizizwa sengathi insimu yamathuluzi okusisiza ibanzi futhi mncane - inamathuba amaningi kakhulu wezinhlelo zokumaketha eziteshini eziwela ukusisiza sihlangane, silinganise futhi sithuthukise ukuxhumana kwethu namathemba namakhasimende.
Sicabanga nokungeza amanye amazwi ku Martech Zone. Ngicabanga ukuthi kunethuba lokwengeza ukumaketha okuhle noma ingqondo yezobuchwepheshe okungenzeka ibe sendaweni yezikhungo ezinkulu zokumaketha eNew York, eBoston, noma eSan Francisco. Uma ungumbhali wezobuchwepheshe… ikakhulukazi onamahlaya, singathanda ukukhuluma nawe. Ukusesha kwethu kuze kube manje akuholelanga ekuholeni okuningi.
Okuqukethwe akufanele kubhalelwe ukubhala okuqukethwe kuphela. Ungaqaphela ukuthi okuqukethwe kwethu kuyehla futhi kuhamba. Okunye kwakho kungenxa yomthwalo wethu womsebenzi, kepha kaningi kunalokho, kumane nje kuyindaba yokuthi asinakho okubalulekile esingakusho. Sifuna konke okuthunyelwe kwebhulogi ukusiza abakhangisi. Njalo okuthunyelwe.
Futhi, sandise izwi lethu nge-podcast yethu, uhlelo lwe-imeyili namavidiyo. Sijoyine amaqembu Umphetho Womsakazo Wewebhu ukukhiqiza umsakazo okhokhelwayo (osakazwa endaweni yangakini) ohambisana nevidiyo ethile enhle. Qiniseka ukuthi uvula - ungasifinyelela ngokusebenzisa i- Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, iTunes, Stitcher futhi Youtube.
Angiqiniseki ukuthi ngubani owabhala igama elithi "social media", kodwa babehlakaniphile. Okuqukethwe yimidiya… kepha okuqukethwe ngaphandle kwezwi akukhona okomphakathi, kumane nje abezindaba. Ungalahlekelwa yizwi lakho. Kugcine komphakathi.
Tags: Ukumaketha i-Podcastubuntuisitayelaizwi
Ukukhangisa kwe-Twitter Ukungeza Abalandeli ku- $ 0.823 Ngayinye
Ingabe Ngempela uku-1% we-LinkedIn?